Fakana an-keriny Votsotra omaly hariva i John Razaly
“Kidnapping” teny Antanimena Fanodinkodinana saim-bahoaka…
Nitrangana fakana an-keriny na “Kidnapping” indray teny Antanimena manoloana ny Villa Pradon omaly takariva tokony ho tamin’ny 6ora sy sasany.
Isan’ny manamboninahitry ny zandary Manara-penitra ny anay, hoy ny SEG
Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny zandarimariam-pirenena fa tsy araka ny fanakianana mandeha amin’izao fotoana amin’ny fanomezana grady sy ny fitsinjarana azy, hoy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (SEG), Jeneraly Randriamahavalisoa Girard ny talata teo.
5 lahy mpaka an-keriny Tsy nilavo lefona raha tsy maty ny 2
Jiolahy mpaka an-keriny miisa 5 no sarona omaly alarobia 10 janoary 2018 tao amin’ny fokontanin’Amboboka sy Manombosoa, distrika Malaimbandy ka ny 3 azo sambo-belona ary ny ny 2 kosa maty voatifitra rehefa nanohitra ny mpitandro ny filaminana.
Houcine Arfa Asaina samborin’ny Frantsay
Namoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena ilay teratany Frantsay Houcine Arfa 54 taona, izay notanana teny Tsiafahy nanomboka ny 20 jona 2017, ary nafindra teny Antanimora avy eo.
Iray volana latsaka kely taorian’ny nakana an-keriny azy dia fantatra fa navotsotra omaly hariva i John Razaly, ilay tovolahy vao 23 taona monja, teratany vahiny mpiasan’ny orinasa UCODIS.
Re fa nandoa onitra araka ny fitakian’ireo mpaka an-keriny ny tompon’ity orinasa ity ka iza no namotsorana an’i John Razaly.Raha iverenana kely ny tantara dia tsy nandrenesam-baovao ny tovolahy hatramin’ny omaly alakamisy 11 Janoary eny fa na dia ny toe-pahasalamany monja aza. Tsara ho marihana ihany koa fa olona faninefany miasa na misy ifandraisany amin’ny UCODIS nisy naka an-keriny ity tovolahy ity ary dia fandoavana vola be hatrany moa no takalon’ny famotsorana. Lasa mihorohoro tanteraka ireo mpiasan’ny orinasa UCODIS. Tsy mandry andro tsy mandry alina ihany koa ny CFOIM, indrindra hatramin’ny faran’ny taona no mankaty izay nampahazo vahana tanteraka ny fakana tera-tany vahiny an-keriny teto amintsika. Vehivavy tera-tany vahiny iray vao 22 taona ihany koa mantsy no nisy nandrahona ny haka an-keriny talohan’ny fetin’ny Krismasy lasa teo, tranga tao alohan’ny nakan’ireo tsy mataho-tody an’i Nathan, ilay tovolahy kely vao 14 taona, zanaka Malagasy mpandraharaha teny Andranotapahana. Miantso ny Fitondram-panjakana mba handray andraikitra haingana araka izany ny CFOIM ho fiarovana ny zon’izy ireo. Mitovy amin’ny teratany Malagasy ihany mantsy izahay, hoy izy ireo noho izany tsy tokony hisy fanavakavahana.